Home Horyaalka Spain Macalinka real madrid Zinedine Zidane oo ka hadlay guushii ay gaartay kooxdiisa.
Zinedine Zidane ayaanan ku andacoon dhaawaca soo gaadhay Real Madrid inaysan sameynin wax cadaalad ah oo ka dhan ah 10-ka nin ee Atalanta laakiin waxay ku qanacday inay 1-0 kuga badiyaan Atlanta kulanka qeyb ka ahaa Champions League wareega 16ka.
Xiddiga qadka dhexe ee Atalanta Remo Freuler ayaa casaan la siiyay kadib qalad uu ku galay Ferland Mendy kaliya 17 daqiiqo lugtii hore ee wareega 16ka ee ka dhacday Gewiss Stadium arbacadii.
Madrid ayaa gacanta ku heysay laakiin seddex darbo oo bartilmaameed ah ayaa la soo saaray ka dib markii Mendy uu dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee Yurub ee ciyaarta oo ka dhiman afar daqiiqo waxaana uu ka toogtay neel ka baxsan xerada ganaaxa.
Kooxda Los Blancos oo ka maqnaayeen xidigeheeda muhiimka ah sida Karim Benzema iyo Eden Hazard iyo liis dheer oo maqnaansho ah, waxayna u muuqdeen inay dab qabadsiinayaan ka hor inta uusan Mendy si fiican u ciyaarin goolkii hore.
Zidane wuxuu ogyahay in guushii shanaad ee isku xigta ee Madrid aysan aheyn wax qurux badan, laakiin wuxuu ku qancay inuu gacanta sare heysto lugta labaad ee guriga real madrid lagu dheeli doono16-ka Maarso.
Tababaraha kooxda Madrid ayaa yiri: “Ciyaar fiican ma aanan ciyaarin caawa, laakiin waxaan u maleynayaa waxa ugu muhiimsan waa natiijada.
Ugudambeyn, gooldhalinta ayaa ah waxa anaga noo muhiim ah. Waa inaan wali ciyaarnaa lugta labaad, laakiin waa natiijo fiican.\_”
Xiddigii hore ee xulka France ayaa intaas raaciyay: “Waxaan la ciyaarnay koox aad u xoog badan. Difaac ahaan way fiicnaayeen waana natiijo wanaagsan.
Khasaarooyin badan ayaa jira, laakiin waxaan sii wadnaa waxa aan si wanaagsan u wadno. Ciyaartoyda halkan jooga waa ka go’an tahay.\_”
Zidane wuxuu amaaney Isco, kaasoo sameeyay kaliya markiisii shanaad ee xilli ciyaareedka – iyo markiisii ugu horeysay ee Champions League – isagoo door aad u sareeya la ciyaaraya Benzema.
Zidane ayaa yidhi: \_”Waqti dheer ayey qaadatay tan iyo markii uu ciyaaray daqiiqado badan wuxuuna si fiican u qabtay boos aan ahayn kiisa.
Waxa uu ciyaaray ciyaar aad u wanaagsan, waan ognahay waxa uu na siin karo si fiican ayuu u qabtay. Markuu ciyaarayo wax walba ayuu garoonka ku siiyaa. Waa guul wuxuuna qabtay shaqo aad u wanaagsan saacad ka badan.
Previous articleEverton oo Rabta in kooxaha manchester united iyo barcelona ay ku garaacdo Norwich City daafacdeeda Max Aarons.
Next articleHalyeeyga Benfica Nuno Gomes oo Raba in Devid Liuz uu Kooxda kusoo laabto.